Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fanavotana manerantany: voatsimbina ny ain'ny mpizahatany taorian'ny nanentsenana bakteria miafina miafina tao Namibia
Tsy miala ao amin'ny firenena intsony i Scott Garrett raha tsy eo izy Fanavotana manerantany karatra maha-mpikambana ao amin'ny poketrany. Ny tantaran'i Garrett mahatalanjona momba ny aretina mitera-doza ao amin'ny safari any Namibia dia porofon'ny antony mahatonga ny fianakaviany hihevitra ny tenany ho tsara vintana manana Global Rescue.
Garrett no filohan'ny Garrett Trucking any Houston, Texas. Lehilahy iray be asa, Garrett dia nahita fotoana hanaovana vakansy adventurous miaraka amin'ny vadiny. Ny diany dia nitondra azy ireo avy tany Houston nankany Dubai, Johannesburg ary avy eo Namibia.
Roa andro taorian'ny fialan-tsasatra, nifoka bakteria miafina i Garrett. Nanjary nisasatra ny fofonainy, nandohalika izy matetika ary nanomboka nahatsapa havizanana lehibe rehefa tamina safari niaraka tamin'ny vadiny.
Tadidin'i Garrett ny nilazany tamin'ny vadiny hoe: “Tsy dia raharaha lehibe loatra izany. Salama aho. ” Tsy ho ela intsony raha tsy tsapany ny hadisoany.
Raha haingana i Garrett nandroaka ny toe-javatra dia tsy nety ny vadiny Tanya, satria mihombo ny soritr'aretin'i Scott. Reraka ny voany ary nanomboka nikatona ny sasany tamin'ny taovany sasany.
Soa ihany fa tonga tany amin'ny hopitaly ara-potoana i Scott sy i Tanya mba hiresahana ny aretina vokatry ny bakteria naterak'i Scott.
Ny halavirana an-trano miaraka amina aretina mandrahona ain'olona dia mety hiteraka fahatsapana mahatsiravina. Izany ilay fahatsapana nofaritan'i Tanya talohan'ny nifandraisany tamin'ny Global Rescue.
"Rehefa teo amiko ny Global Rescue," hoy i Tanya, "dia nanana mpiara-miasa mahatakatra nanampy ahy hamakivaky azy aho. Tsy irery aho. Tsy ho very fotsiny aho amin'izany korontana izany. Tsy natahotra intsony aho. ”
Noho ny fanapahan-kevitr'i Tanya haingana sy ny maha-mpikambana ao amin'ny Garrett's Global Rescue dia afaka niditra tao amin'ny fikarakarana sahaza azy ireo izy noho ny toe-piainana niharatsy haingana an'i Scott. Global Rescue dia nitarika an'i Garrett tany amin'ny toerana akaiky indrindra mba hamahana ireo olana ara-pahasalamana nandrahona ny ainy sy ireo olona naparitany hanampy an'i Tanya amin'ny fanaraha-maso ny fikarakaran'ny vadiny.
Na dia ireo mpandeha iraisampirenena mitandrina indrindra aza dia mety hahita toe-javatra atahorana ho faty. Niorina tamin'ny 2004, Global Rescue dia tsara kokoa noho ny fiantohana amin'ny dia. Tsy mitovy amin'ny fiantohana fitsangantsanganana, ny mpikambana ao amin'ny Global Rescue dia tsy mila miditra amin'ny sahirana amin'ny fitakiana fiantohana. Amin'ny maha-mpitarika manerantany ny valin'ny krizy, ny famindra toerana vonjy maika ary ny famonjena ny saha, dia mamaly haingana ny Global Rescue rehefa mitaky hetsika haingana ny mpikambana iray.
Miaraka amin'ny ekipa ekipa mpitsabo sy fiarovana malaza mijanona manerantany, anisan'izany ireo veterana miasa manokana amin'ny tafika, Global Rescue dia manome fandriam-pahalemana amin'ny vidiny mahagaga. Ireo mpikambana ao amin'ny Global Rescue dia manana drafitra famerenana amin'ny laoniny, izay manaisotra ny ahiahy amin'ny dia lavitra.
eTurboNews nitatitra momba ny Boots on the Ground ary tsy mahavita miomana, miomana tsy mahomby.
Fihemorana vetivety: Ny fihetsiketsehana dia miteraka fihenan'ny 5.4% amin'ny famandrihana sidina Hong Kong